Faah-faahin:-Qarax Khasaare Geystay Oo Ka Dhacay Gobalka Gedo – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Faah-faahin:-Qarax Khasaare Geystay Oo Ka Dhacay Gobalka Gedo
Wararka ka imaanaya deegaano katirsan gobalka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo katirsan kuwa militariga Kenya, qarax khasaare geystay lagula eegtay deegaano katirsan gobalkaasi.
Goobjoogayaal ayaa Idaacada Simba ee Magaalada Muqdisho u sheegay iney maqlayeen qarax xoogan oo ay u badinayaan inuu ahaa miinooyinka kuwa dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga hago, balse aysan garan Karin cida lala beedsaday qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxaasi miino.
Ilo xog ogaal ah oo ku sugan gobalka gedo ayaa Simba u sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxaasi lala beegsaday ciidamada Kenya ee marayay inta u dhaxaysa deegaanka Buusaar iyo Ceel-waaq ee gedo.
Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobalka gedo oo ay xiriiro la sameysay Warbaahinta Simba ayaa u sheegay inuu jiro qaraxaasi, waxyeelana ay kasoo gaartay gaari Beebe ah oo ay wateen askar katirsan melleteriga Kenya, waxeyna inoo xaqiijiyeen inuusa jirin khasaare dhimasha ah oo ka dhashay qaraxaasi.
War kasoo baxay Taliska howlgalada Al-shabaab ayaa lagu sheegtay mas’uuliyada qaraxaasi lala eegtay ciidamo katirsan dowladda Kenya oo marayay inta u dhaxaysa deegaanka Buusaar iyo Ceel-waaq.
Al-shabaab ayaa sheegay iney weerarkaasi qaraxa ahaa ay ku burburiyeen gaari beeba ahaa oo ay wateen ciidamo katirsan kuwa xooga Kenya, ciidamadii gaariga saarnaana gaba ahaaba ay halkaasi ku geeriyoodeen. Shabaab ayaa intaa ku daray gaarigii gubtay iney askarta Kenya u jiiteen dhanka Buusaar.
Wali wax war ah kama soo bixin Taliska guud ee ciidamada Kenya ee Soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi qaraxa ahaa ee Al-shabaab ku sheegeen iney ku bur buriyeen gaari beebo ahaa.
Xarakada Al-shabaab ayaa inta badan guula ka sheegta weerara ay la beegsadaan gawaarida iyo xarumaha ciidamada Kenya ee gobalka gedo, qaraxan ayaa kusooo beegmeya xili dhawaan ciidamada Kenya ee soomaaliya ay kordhiyeen weerara iyo duqeymaha ay la beegsadaan saldhigyada Al-shabaab.